Ndị nlekọta kaadị: Deck Building Roguelike Card Game Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Ndị nlekọta kaadị: Deck Building Roguelike Card Game Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na Editor | Septemba 29, 2021
Ndị na -eche kaadị bụ egwuregwu RPG na -ewu ewu ebe mkpebi na kaadị ọ bụla nwere ike gbanwee ihu n'ọgụ. Na -emeri kaadị ọhụrụ, wuo oche ọhụrụ, na ịlụ ọgụ dị iche iche, ndị iro na -esiwanye ike. Chọọ ụwa adịgboroja akpọrọ Valentia, ebe ndị nchekwa chebere udo ruo ọtụtụ puku afọ ruo ụbọchị Chaos rutere. Ọ bụ ọrụ gị dị ka dike iweghachi nguzozi na udo na Valentia site na imeri ndị iro gị niile, ehihie na abalị ruo mgbe alaeze ya ga -echekwa ọzọ!
Isi ihe dị na egwuregwu egwuregwu ụlọ
– Rụpụta kaadị nke gị nwere mwakpo dị iche iche na usoro nchekwa iji ziga ndị iro gị n'ụlọ mkpọrọ Chaos ha si na ya pụta.
– Gagharịa n'ọtụtụ alaeze na -achọ iweghachi udo n'ime ụwa egwuregwu RPG egwuregwu roguelike jikọtara ya na ezigbo vs. kaadị kaadị agha ọjọọ.
– Gbalịa atụmatụ dị iche iche na nke ọhụrụ, egwuregwu ụlọ egwuregwu na -atọ ụtọ ebe mmegharị ọ bụla nwere ike ikpebi oke agha.
– Kwalite oche gị, nwalee ike ọhụrụ, wee bụrụ dike na Roguelike RPG Adventure Games.
NA IKPEAKA MA Ọ DỊGHỊ ntakịrị
Ike agwụla gị na ị ga -egbu spire na olulu mmiri ehihie na abalị niile? Gbalịa egwuregwu anyị! Zụlite ezigbo atụmatụ wee gbuo ndị iro iji mee ka abalị na ụbọchị Valentia bụrụ udo ọzọ.
Biko rụba ama! Egwuregwu egwuregwu ụlọ a bụ n'efu igwu egwu, ma o nwere ihe ndị a pụrụ iji ezigbo ego zụta. Ụfọdụ njirimara na mgbakwunye akpọrọ na nkọwa nke ndị nchekwa Kaadị: Egwuregwu Kaadị Roguelike kaadị nwekwara ike zụta maka ezigbo ego.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Ụlọ, Card, CheatsHack, Deck, egwuregwu, Ndị nche, Roguelike
← Ọchịchị nke Alaeze – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Idle High School Tycoon – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →